ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: November 2010
Indian man accused of marrying and selling 60 women
မိန်းကလေးအယောက် ၆၀ ကိုလှည့် ဖြားလက်ထပ်ပြီးရောင်းစားခဲ့ သူ...
ဒီလိုမျိူးယူနီဖောင်းနဲ့ လက်နက်ကိုင်ထားယင် သတိထား...
အမျိူးသမီးပေါင်း အယောက် ၆၀ ကို လက်ထပ်ယူခဲ့ ပြီး ပြည့် တန်ဆာအဖြစ်ရောင်းချခဲ့ သည်ဟု သံသယ
ရှိနေသည့်အမျိူးသားတစ်ဦးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ ကဖမ်းဆီးပြီး တရားစွဲဆိုခဲ့ လိုက်ပါတယ်...
အဆိုပါ သံသယရှိသည့် တရားခံကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လက်ဖက်စိုက်ပျိူးရာဒေသဖြစ်သည့် အနောက်ဘင်္ဂေါ
နယ်၊ ဒါဂျီလင်မြို့ တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ၎င်းအား လူကုန်ကူးမှုအပါအ၀င် ပြစ်မှုအများအပြား
နှင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
ဗစ်ကီ ဗစ်ဆွာကာမာ ဟုအမည်ရှိသည့် အဆိုပါအမျိူးသားဟာ မိန်းကလေးများကို လက်ထပ်ပြီးနောက် မွန်
ဘိုင်းနှင့် ပျူမ်း မြို့ များရှိ ပြည့် တန်ဆာရုံများသို့တစ်ဦးလျှင် ရူပီး ၇၀၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀၀ ( ဒေါ်လာ ၁၅၀၀
ခန့် မှ ၂၁၀၀ ခန့် ) အထိ ဈေးနှုံးဖြင့် ရောင်းစားခဲ့ တာဖြစ်တယ် လို့ ရဲများက အခိုင်အမာဆိုခဲ့ ပါတယ်....
၎င်းရောင်းစားခံခဲ့ ရသည့် မိန်းကလေး အနည်းဆုံး ၉ ဦးကို ခြေရာခံစုံစမ်းနိုင်ခဲ့ ပြီဖြစ်ပါတယ်...
" သူဟာ သူ့ ကိုယ်သူ ခွင့် ဖြင့်ပြန်လာကာ တာဝန်ပြန်လည်မထမ်းဆောင်မီ အိမ်ထောင်ပြုချင်သည့် တပ်မ
တော်သားတစ်ဦးအဖြစ် ဟန်ဆောင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူဟာ လက်ဖက်ခြံနှင့် ကျေးရွာများမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် မိသားစုဝင် မိန်းကလေးများကို နေရာဒေသအမျိူး
မျိူးရွှေ့ ပြောင်းကာ အကြိမ်ကြိမ်ဖြားယောင်းသိမ်းသွင်းခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအ
ကဲ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
လူလိမ် ဗစ်ဆွာကာမာ ကျူးလွန်ခဲ့ သည့် ရာဇ၀တ်မှုများကို ရှုခင်းလှပသည့် လက်ဖက်ခြံများကြောင့် နာ
မည်ကျော်တောင်ပေါ် အပန်းဖြေစခန်းများတည်ရှိသည့် ဒါဂျီလင် အခြေစိုက် အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့ အ
စည်းတစ်ခုမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို သတင်းပေးပေးပို့ ခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
အမျိူးသမီးများအတွက်တော့ သတိဆိုတာ လိုတယ်မရှိပါဘူး...
လူတစ်ယောက်ကို လပ်ထပ်ဖို့ အထိချစ်မိ၊ ကြိုက်မိပြီဆိုယင်တော့ ထိုသူရဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်၊ မိဘ
ဆွေမျိူးများကို သူပြောတာနဲ့ တင်မဟုတ်ပဲ မိမိရဲ့ မိဘဆွေမျိူးများကလည်း သိထားတာဖြစ်အောင် လုပ်
ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ သူပြောတာနဲ့ တင်မျောပြီး နှစ်ကိုယ်တူ၊ အလိုတူကြည်ဖြူပြီးကာမှ လှည့် စားရက်တယ်လို့ 
တော့ ဖြင့် အဆုံးမှာ စွပ်စွဲယင်တော့ ထိုမိန်းကလေး ညံ့ လို့ သာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်...
အိန္ဒိယမှာတော့ စစ်သားဟာ ပျိူတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်ပုံရပါတယ်...
A man suspected of tricking at least 60 women into marrying him before selling them into prostitution has been charged by police in India. The 27-year-old apparently charmed his victims overafive-year period by pretending to beawell-paid soldier in the military.
The suspect was detained in Darjeeling,atea-growing district of the eastern state of West Bengal, and has been charged with several offences, including human trafficking. Police claimed the man, named as Vikky Biswarkarma, had married the girls and then sold them to brothels in the cities of Mumbai and Pune for 70,000-100,000 rupees (£973-£1,390).
At least nine of his alleged victims have been traced. District police chief Debendra Prasad Singh said: "He used to pose as an army man who had come home on holiday and wanted to get married before returning to work.
"He used to change bases frequently to lure girls from poor families in tea gardens and villages." Police were tipped off about Biswarkarma's alleged crimes byanon-government organisation in Darjeeling,apopular mountainous resort known for its tea plantations.
Posted by peter kyaw | at 2:01 AM | 1 comments
Labels: news: sky.com
Dog bowl sells at auction for $27,450
ဒေါ်လာ ၂၇၄၅၀ ရတဲ့ ခွေးစာခွက်...
စားခွက်တောင် ဒေါ်လာသောင်းချီတန်တယ်ဆိုတော့ နယ်နယ်ရရခွေးမဟုတ်ပေဘူး...
ခွေးစာခွက်များ ဒီဇိုင်းမျိူးစုံလေလံတင်ရောင်းချသည့် ပွဲတစ်ခုတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ လော့ စ်အိန်ဂျလိမြို့ 
မှ အနုပညာရှင် အက်ဒ်ရပ်စ်ကာ စိတ်ကူးပုံဖော်ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ခွေးစာခွက်တစ်ခုဟာ ဒေါ်လာ ၂၇၄၅၀
( ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါ့ မလားလို့ တောင်ထင်မိတယ်...) ဖြင့် ဈေးအမြင့် ဆုံးရရှိခဲ့ တယ် လို့ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်
နယ်မှ လေလံပွဲအဖွဲ့ တစ်ခုကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
လွန်ခဲ့ သည့် အင်္ဂါနေ့ ကလော့ စ်အိန်ဂျလိစ် နှင့် ဆန်ဖရန်စစ်စကိုမြို့ များတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ သည့် အရောင်းပြပွဲ
တစ်ခုမှာ ရပ်စကာ ရဲ့" Untitled ( Frido ) 2010 " ခွေးစာခွက် ကဈေးအမြင့် ဆုံးရရှိခဲ့ တာဖြစ်သည်ဟု
ဘွန်ဟန်း လေလံအဖွဲ့ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဒေးဗစ်ဟော့ ကနေး ရဲ့ ခွေးစာခွက်က ဒေါ်လာ ၆၇၁၀၊ အနုပညာရှင် ကင်နီရှာ့ ဖ် ရဲ့ ဖန်တီးမှု က ဒေါ်လာ
၄၅၇၅၊ ရော့ စ်ဘလက်ကနာ ပြုလုပ်ဖန်တီးသည့် ခွက်က ဒေါ်လာ ၂၀၇၄ နှင့်ချပ်အာနိုဒီ ရဲ့ ဆန်းသစ်မှုက
ဒေါ်လာ ၁၂၂၀ အသီးသီးရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်....
အဆိုပါခွေးစာခွက်များကို ၀င်ငွေနည်းပါးပြီး အသက်အရွယ်ကြီးရင့် နေကြပြီဖြစ်သည့် တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူ၊ ခွေး
ပိုင်ရှင်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အကျိူးအမြတ်များပြည်လည်ခွဲဝေ ထောက်ပံ့ မည့်PAWS/LA အဖွဲ့ အ
တွက် ရည်စူးပြီး လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ကမ္ဘာမှာ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ ကွာဟချက်ကြီးမားမှုကတော့ ခွေးစာခွက်ဖိုးလောက်တောင် ၀င်ငွေမရှိတဲ့ သူတွေ
သန်းပေါင်းရာနဲ့ ထောင်နဲ့ ချီပြီးရှိနေချိန်မှာ ချမ်းသာသူတွေကျတော့ လည်း ခွေးစာခွက်ကလေးတစ်ခုအ
အခုပေးဝယ်တဲ့ ဈေးနှုံးနဲ့ ငွေတွေကတော့ ကူညီထောက်ပံ့ ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ဆိုတော့ အလှူလို့ သဘော
A California auction house saidasale featuring designer dog bowls was topped bya$27,450 doggie dish created by Los Angeles artist Ed Ruscha.
Bonhams auction house said the sale, on Tuesday, in Los Angeles and San Francisco, featured Ruscha's "Untitled (Fido) 2010" as the top bid-getter.
David Hockney's bowl sold for $6,710,abowl by artist Kenny Scharf sold for $4,575,adish made by Ross Bleckner sold for $2,074 andaChuck Arnoldi work sold for $1,220.
The dog bowls were sold to benefit PAWS/LA,anon-profit aimed at benefiting low-income and elderly pet owners.
You can see the other dog bowls here.
Posted by peter kyaw | at 12:37 AM | 1 comments
Labels: news: bonhaums.com
Sniffer Rats Detect Land Mines in Tanzania and Mozambique
တန်ဇန်းနီးယားနဲ့ မိုဇမ်ဘစ်က မိုင်းရှာကြွက်များ...
ဒတ်ခ်ျ ( ဟော်လန် ) မှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုသည် မြေမြုပ်မိုင်းများ အနံ့ ခံ
ရှာဖွေနိုင်ရန် ကြွက်များအားလေ့ ကျင့် သင်ကြားပေးခဲ့ လေသည်....
အဆိုပါကြွက်များဟာ မြေမြုပ်မိုင်းများတွင်ပါဝင်သည့် တီအင်တီယမ်း များကို သွင်ပြင်မူရာ သိ
စိတ်တုံ့ ပြန်မှုနည်းပညာဖြင့် အာရုံခံစားသိရှိနိုင်ရန်သင်ကြားပေးထားခြင်းခံရပြီး မိုင်းများကို မှန်
ကန်စွာ ထောက်လှမ်းအချက်ပြနိုင်ပါက ၎င်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် အစာဖြင့် ဆုချသည့် စနစ်
ကိုကျင့် သုံးခဲ့ ပါတယ်...
Rats that have been trained Dutch Non Governmental Organisation are able to sniff out deadly landmines. The rodents are trained to detect the TNT in landmines through behavioral psychology:aclick sound to signalafood reward whenever they make the correct detection.
လူအသေအပျောက် အထိအခိုက်နည်းစေတာမို့ ဒီနည်းကို သုံးသင့် ပါတယ်...
မိုင်းရှာ ကြွက်တန်းလျားပေါ့ ....
ဖော်နိုင်ယင်ဖော်....ပေါ်လို့ ကတော့ ဆုရမယ်...
ကြွက်ဆရာကြောင် မဟုတ်တဲ့ လူ...
နည်းပြနဲ့ သင်တန်းသား ....အကြင်နာပွား...
Posted by peter kyaw | at 12:08 AM | 1 comments
နေ ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ သည့် စပိန်နိုင်ငံမှ အမျိူးသမီး...
စပိန်နိုင်ငံမှ အမျိူးသမီးတစ်ဦးက သူမ၏ရှေ့ နေများကတစ်ဆင့် နေထိုင်ရာ ဗီဂိုဂါလီဆီယာ မြို့ တွင်တင်
သွင်းလျှောက်ထားခဲ့ ပြီးနောက် သူမဟာ နေလုံးကြီးကို ပိုင်ဆိုင်သည့် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားခဲ့ ပြီလို့ ဆိုလိုက်ပါ
အသက် ၄၁ နှစ်ရှိ အန်ဂျယ်လာဒူရမ်း က " ဂြိုလ်ကမ္ဘာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိဘူးလို့ နိုင်ငံတစ်ကာ တရား
ရုံးဥပဒေများက တားမြစ်ထားခဲ့ ပါတယ်...ဒါပေမယ့် ကြယ်တာရာတွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကတော့ ဘာမှမပြော
ထားခဲ့ ပါဘူး...နေဆိုတာကလည်း ကြယ်တစ်စင်းပဲလေ..." လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်မလေ့ လာစုံစမ်းသိရှိရသလောက်ကတော့ လူတွေဟာ ဒီစင်္ကြာဝဠာအတွင်းက တစ်ခြားကြယ်တွေကို
ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ၀ယ်ယူခဲ့ ကြပေမယ့် နေ ကိုတော့ ဘယ်သူမှမ၀ယ်ကြသေးပါဘူး...ဒါကြောင့် နေ ကိုဘယ်
သူမှမပိုင်သေးလို့ ကျွန်မက ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တာပါ...ကျွန်မက နေ ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတောင်းဆိုလျှောက်
ထားလိုက်တော့ ကျွန်မရဲ့ ရှေ့ နေက ရယ်မောခဲ့ ပေမယ့် ထိုကိစ္စမျိူးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိတဲ့ စာရင်းသွင်း
မှတ်ပုံတင်တဲ့ အရာရှိတွေနဲ့ စုံစမ်းလိုက်ခဲ့ တဲ့ အခါမှာတော့ ဒါဟာဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာသိရှိခဲ့ ရပါတယ်...
အခုတော့ ကျွန်မဟာ စင်္ကြာဝဠာရဲ့ အလယ်ဗဟို၊ ကမ္ဘာမြေကနေမိုင်ပေါင်း ၁၄၉၆၀၀၀၀၀ ဝေးကွာတဲ့ နေရာ
မှာရှိတဲ့ အာကာသဆိုင်ရာ အခေါ်အဝေါ်အရ G2 လို့ ဖော်ပြထားတဲ့ နေ ကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အ
ထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းရှိနေပါပြီ...." လို့ အဆိုပါအမျိူးသမီးကပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဒီလိုမျိူးတော့လုပ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပေလိမ့် မယ်...
" ကျွန်မက အခုဆိုနိုင်ငံတစ်ကာက အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ တောင်ကြိုးစားနေပါတယ်...အဲဒါအောင်မြင်ခဲ့ ယင်
တော့ နေစွမ်းအင်အသုံးပြုတဲ့ သူတွေဆီကနေ အခွန်ကောက်ခံဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်...
ရရှိတဲ့ အထဲကနေ ၅၀ ရာခိုင်နှုံးကို နေ ( သူရိယ ) တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ် အသုံးပြုပြီး ၂၀ ရာခိုင်နှုံးကို
တော့ နေစွမ်းအင်သုံး ဆိုင်ရာအငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများအတွက် အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီါ် ၂၀ ရာခိုင်နှုံးကိုတော့ သု
တေသနဆိုင်ရာမှာသုံးပြီး ၁၀ ရာခိုင်နှုံးကတော့ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ အငတ်ဘေးပြဿနာ ပပျောက်စေဖို့ အ
သုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ သူမက ဆက်ပြီးပြောခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီလိုသာဆို နေလောင်လို့ အသားအရေတွေ ခြောက်ကုန်တာ၊ အသားမည်းကုန်တာ၊ အေ၇ပြားကင်ဆာ
ဖြစ်တဲ့ သူတွေလည်း သူမကိုတရားစွဲလို့ ရမှာပေါ့ နော်...
ရဖို့ တစ်ခုတည်း ကြည့် မယ်ဆိုယင်တော့ အမှားကြီးမှားသွားပါလိမ့် မယ်....
A Spanish woman says she now owns the sun after she filed papers with lawyers at her home at Vigo Galicia in Spain. Angela Duran, 41, said: "International law forbids anyone to claimaplanet, but nobody ever said anything about stars and the sun isastar."I checked and found that despite all the people buying stars no-one had purchesed the Sun in our solar system and, as it was free, I decided to take it. My lawyer laughed when I filed my claim but he checked with the officials that register such things and discovered it was possible."I now haveacertificate that says I am the owner of the sun, described asastar of spectral type G2, located in the centre of the solar system, located at an average distance from earth of about 149,600,000 miles ...'."
"I am trying to have it recognised internationally. Then I plan to makeatax for solar power users." She added: "I will use 50 per cent forasun state budget, 20 per cent for solar pensioners, another 20 per cent for research and health and 10 per cent to end hunger on earth."
Posted by peter kyaw | at 12:31 AM |5comments
'Lucky' Australian woman run over by own car - twice
ကံမကောင်းစွာနဲ့ ကိုယ့် ကားနဲ့ ကိုယ်ပြန်ပြီး တက်ကြိတ်ခံရ၊ ကံကောင်းလို့ မသေ
အမလေး !!! ကံကောင်းလို့ ...ကိုယ့် ကားနဲ့ ကိုယ်နှစ်ခါပြန်ပြီးအကြိတ်ခံရတာတောင်မသေးတာ...
သူမကိုယ်တိုင်မောင်းလာခဲ့ သည့် ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်အတိုက်ခံရကာပြန်လည်တက်ကြိတ်
ခံခဲ့ ရသည့်သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ အရှေ့ တောင်ပိုင်းမှ အမျိူးသမီးတစ်ဦးအား အရေးပေါ်သူနာပြု
ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများက ကုသပေးခဲ့ ကြရပါတယ်...
အဆင့် မြင့် အသက်ကယ် အရေးပေါ်အသည်းအသန်အခြေအနေများအတွက် အထူးခန့် အပ်ထားသည့် 
ကျန်းမာရေးဝန်းထမ်များအား မြောက်ပိုင်း နိုဗယ်ပန်းခြံအရပ်သို့ လွန်ခဲ့ သည့် နေ့ ညနေ ၅ နာရီခွဲ မတိုင်မီ
အချိန်ခန့် က ခေါ်ယူအကူအညီတောင်းခံခဲ့ ကြရတာဖြစ်ပါတယ်...
အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်း ကရိတ်ဘရွတ်ကပြောကြားခဲ့ ရာမှာ အဆိုပါအမျိူးသမီးဟာ ကံဆိုးမိုး
မှောင်ကျမှု ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ တာတောင် မယုံကြည်နိုင်လောက်စရာ အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ ရပါ
တယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
" အသက် ၃၇ နှစ်ရှိ အမျိူးသမီးက သူမကားပေါ်မှ မဆင်းခင် ကားရဲ့ လက်ကိုင်ဘရိတ်ကို ချခဲ့တယ်လို့ 
ထင်ခဲ့ ကြောင်း၊ သို့ သော်လည်းကားဟာ လမ်းအတိုင်းနောက်ပြန်လိမ့် လာကာ သူမကိုတိုက်မိပြီး တက်
ကြိတ်သွားခဲ့ တာဖြစ်တယ်..." လို့ မစ္စတာဘရွတ်ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" ကားဟာ သူမရဲ့ ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းနဲ့ ခြေထောက်တွေကိုတက်ကြိတ်သွားပြီး လမ်းတစ်ဖက်က ခြံစည်း
ရိုးကိုတိုက်ခဲ့ ပါတယ်...ပြီးတော့ အဲဒီကနေ အရှိန်နဲ့ နောက်ပြန်လိမ့် လာကာ သူမကိုနောက်တစ်ဖန်ထပ်
ကြိတ်သွားပါတော့ တယ် လို့ သူမကပြောပြခဲ့ ပါတယ်..." လို့ သူကဆိုခဲ့ ပြီး အရေးပေါ်သူနာတင်ယာဉ်မှ
တာဝန်ရှိသူများက သူမအနေနှင့် ဝမ်းဗိုက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်း သွေးယိုစီးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ စိုးရိမ်
မကင်းဖြစ်ခဲ့ ကြရတယ်လို့ လည်းဆိုပါတယ်...
" ပထမအကြိမ် ကားတိုက်ပြီး အကြိတ်ခံလိုက်ရကတည်းက သူမအနေနဲ့ မလှုပ်နိုင်တော့ ဘူးလို့ သူမက ဆို
ခဲ့ ပါတယ်...သူမရဲ့ တင်ပါးတွေ၊ ညာဘက်ခြေထောက်နဲ့ ခြေကျင်းဝတ်တို့ ဟာ အပြင်းအထန်နာကျင်နေခဲ့ 
ပါတယ်...ပြင်ပမှာထိခုိုက်ဒါဏ်ရာရတဲ့ လက္ခဏာကြီးကြီးမားမား မရှိတာကြောင့် သူမမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း
ပိုင်းဒါဏ်ရာရပြီး သွေးယိုစီးမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ စိုးရိမ်ခဲ့ ပါတယ်..." လို့ သူကဆိုပါတယ်...
အရေးပေါ်သူနာပြုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ သူမကို အဲလ်ဖရက်ဆေးရုံကို ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒါဏ်ရာ
ရခဲ့ ပေမယ့် စိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေ ( အသက်မသေနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေ ) နဲ့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ ပါ
တယ် လို့ ထိုသူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ကံ၊ ကံနှယ်ခေလွန်းချင်တော့ ကိုယ့် ကားနဲ့ ကိုယ်တောင် အသားလွတ် နှစ်ခါပြန်တက်ကြိတ်ခံရပါရော
Paramedics have treatedawoman in Melbourne's south-east after she was run over by her own car - twice. Advanced life support and intensive care paramedics were called to Noble Park North just before 5.30pm yesterday.
Paramedic Craig Brooks said the woman was incredibly lucky despite the unlucky chain of events. "We were told that the 37-year-old thought she had put the handbrake on as she got out of her car, but it started to roll backwards down the driveway and knocked her over," Mr Brooks said.
"She said that the car ran over her lower abdomen and legs before crossing the street, hittingafence on the other side of the road, bouncing back and running over her again." He said ambulance officers were concerned that she might have been bleeding internally.
"The woman said she couldn't move after being crushed the first time," he said. "She had pain through her hips, her right leg and ankle. We had concerns that, while there were no major open wounds, she may have been bleeding internally." Intensive care paramedics took her to The Alfred hospital inaserious but stable condition, he said.
Posted by peter kyaw | at 11:50 PM |0comments
ဒူဘိုင်းမက်ထရိုဟုခေါ်သော မြေအောက် ( မြေပေါ်လည်းပါသပေါ့ ) မြို့ ပါတ်ရထားဟာ ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံး
အစိမ်းလိုင်းနဲ့ အနီ လိုင်းဆိုပြီး လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်...
အနီလိုင်းကတော့ လက်ရှိဖွင့်လှစ်ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပြီး ၃၂.၄ မိုင် ( ၅၂.၁ ကီလိုမီတာ ) ရှည်လျားပါတယ်...
ဘူတာပေါင်း ၁၀ခုပါဝင်တဲ့ အနီလိုင်းရဲ့ ပထမအဆင့် ကို ၉ ရက်၊ ၉လ၊ ၀၉ ခုနှစ်၊ ညနေ ၉ နာရီ ( ၉ လေး
လုံးနေ့ မှာ ) ဒူဘိုင်းစော်ဘွား ရှိတ်မိုဟာမက်ကိုယ်တိုင် ဖွင့် လှစ်ပေးခဲ့ ပါတယ်....
ဒူဘိုင်း လူဦးရေ ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုံးနဲ့ ညီမျှတဲ့ လူပေါင်း ၁ သိန်း ၁ သောင်းကျော်ဟာ မက်ထရို၊ မြို့ ပါတ်လျှပ်
စစ်ရထား စတင်ပြေးဆွဲတဲ့ ပထမနှစ်ရက်အတွင်းမှာ စီးနင်းခဲ့ ကြပါတယ်...
ရထားရဲ့ အမြန်ဆုံးနှုံးကတော့ တစ်နာရီ ၆၈ မိုင် ( ၁၁၀ ကီလိုမီတာ နှုံး ) ရှိပြီး တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းအား
လုံးအတွက် ကုန်ကျမည့် စားရိတ်ကတော့ဒေါ်လာ ၇.၈ ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်...
(အဆိုပါ အနီလိုင်းပထမအဆင့် ဖွင့် ပွဲနောက်ပိုင်းမှာ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့ တဲ့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီကို ပေးဆပ်ရမည့် လုပ်ခငွေကြေးများအကြေအလည် မပေးလို့ ထိုကုမ္ပဏီက နှုတ်ထွက်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ ပါ
သေးတယ်......အာရပ်ကုလားများက ရထားလမ်းများ၊ ဘူတာများကိုတော့ ပြီးအောင်အရင်ဆောက်ပြီး
အကြွေးတွေကိုတော့ ရက်အတိအကျမသတ်မှတ်နိုင်တဲ့ ကာလမှာ ပေးမယ်လို့ ဆိုတာကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း
ထိုကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ခဲ့ တဲ့ မိတ်ဆွေအင်ဂျင်နီယာများကပြောပြလို့ သိရပါတယ်...)
Dubai metro is the longest driverless, fully automated metro network in the world. There will be two lines - green and red. The Red Line is already partly operational. Its system length is 32.4 mi (52.1 km). The first section of the Red Line, covering 10 stations, was ceremonially inaugurated at9: 09 : 09 PM on September 9, 2009, by Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai.
More than 110,000 people, which is nearly 10 per cent of Dubai’s population, used the Metro in its first two days of operation. The train's top speed is 68 mph (110 kmh). The construction cost of Dubai Metro is $7.8 billion.
Posted by peter kyaw | at 12:22 AM |0comments
သတိ !!! အပျိူမှန်လျှင် ဖုံးမကိုင်ရ...
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ရွာတစ်ရွာတွင် အိမ်ထောင်မကျသေးသည့် မိန်းမပျိူများအား အမျိူးဇတ်ကြောင့် သဘော
မတူသူများနှင့် ခိုးရာလိုက်ပြီး လက်ထပ်နိုင်ရန် ချိန်းဆိုစီစဉ်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်ရန် အပျိူမိန်းကလေးများအား
မိုလ်ဘိုင်းဖုံးများ အသုံးပြုခွင့် မပေးတော့ ဟုဆိုပါတယ်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ လန့် ခ်ကျေးရွာကောင်စီမှ လူပျိူများကိုတော့ မိဘအုပ်ထိမ်းသူများရဲ့ ကြီးကြပ်မှု
ဖြင့် မိုလ်ဘိုင်းဖုံးများအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် အပျိူလေးများကတော့ လုံးဝအသုံးပြုခွင့် မရနိုင်ဘူးလို့ ဆုံး
ယခုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ စည်းကမ်းဟာ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲပြီး တရားမျှတာမှုမရှိဘူးလို့ ဒေသခံအမျိူးသမီး
အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရဲ့ အချိူ့ သောဒေသများမှာ ဟိန္ဒူဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အရမိသားစုမျိူးနွယ်တစ်
ခုထဲမှ အမျိူးသားနှင့် အမျိူးသမီးများ ( လူပျိူ၊ အပျိူ အချင်းချင်းလက်ထပ်ခြင်း ) ကိုတားမြစ်ထားပြီး ၎င်းတို့ 
ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများကို မိဘဆွေမျိူးများက စီစဉ်ပေးနေကျဖြစ်ပါတယ်....
ရှေးရိုးဆန်သည့် ကျေးလက်ဒေသများမှာ ထိုအစဉ်အလာကို ဆန့် ကျင်ပြီးလက်ထပ်သူများကို မိသားစုဂုဏ်
သိက္ခာကိုထိမ်းသိမ်းသောအားဖြင့်သတ်ဖြတ်အပြစ်ပေးခြင်းဟုဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် သတ်ဖြတ်ကာ
အားကို!!!...ဒါနောက်ဆုံးပဲနော်...အဘတို့ ကနောက်ဆို ဖုံးပေးမကိုင်တော့ ဘူးတဲ့ ...
နောက်ဆို ညောင်ညိုပင်အောက်ကောက်ရိုးပုံမှာချိန်းတွေ့ ကြမယ်...ဘိုင်းဘိုင်...
တစ်ချိူ့ ဖြစ်ရပ်များမှာ ထိုကျေးရွာကောင်စီလူကြီးများကိုယ်တိုင် ထိုပြစ်ဒါဏ်ကိုချမှတ်ကြတာဖြစ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ 
အနေနဲ့ မကြာခဏ၀င်ရောက် တားမြစ်ခဲ့ ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
လူငယ်ကာလသားများနှင့် ရွာသူမိန်းမပျိူလေးများဟာ တားမြစ်ကန့် ကွက်ထားသည့် ကြားမှ မိုလ်ဘိုင်းဖုံး
ဖြင့်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ချိန်းဆိုကာ ခိုးပြေးကြမည်ကို ရွာလူကြီးများက စိုးရိမ်နေခဲ့ ကြပါတယ်...
လွန်ခဲ့ သည့် လမှာပင် လန့် ခ်ကျေးရွာ ပါဝင်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဥတ္တာပရာဒေ့ ရ်ှပြည်နယ်မှ မူဇက်ဖာနဂါ
နယ်မြေဒေသအတွင်း စုံတွဲပေါင်း ၃၄ တွဲ ခိုးရာလိုက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကဆိုပါတယ်...
ထိုသို့ ချစ်၍ခေါ်ရာလိုက်ခဲ့ ပါသည့် စုံတွဲများထဲမှ ၈ ဦးကတော့မိသားစုဂုဏ်သိက္ခာ ကျစေတဲ့ အတွက်ဆိုပြီး
သတ်ဖြတ်ခံ ခဲ့ ရတယ်လို့ လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ကဆိုပါတယ်...
မျိူးနွယ်တူ ( ဆွေမျိူးနီးစပ် ) ကောင်လေးများနှင့်ခိုးရာလိုက်ပြေးသွားခဲ့ တဲ့ မိန်းကလေး ၃ ယောက် ကို ၎င်း
တို့ မိသားစုမှ ( ဖခင်၊ ဦးကြီး၊ ဦးလေး၊ အစ်ကို ) အမျိူးသားများက ခေါင်းဖြတ်သတ်လိုက်ကြတယ်လို့ပြည်
နယ်ဒုတိယရဲအကြီးအကဲ ဘရစ်ဂ်ျလဲယ်လ် ကပြည်နယ်မြို့ တော် လပ်ခနောင်းမှာ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ပန်ချယတ် လို့ ခေါ်တဲ့ ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးကောင်စီကို ရွာထဲမှလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ သက်ကြီး
ရွယ်အိုများ (အသက်အရွယ်ကြီးသူများ ) ဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားလေ့ ရှိပြီး ၎င်းတို့ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များဟာ ဥပဒေ
ကဲ့ သို့ လိုက်နာရမည့် အရာမျိူးမဟုတ်ပေမယ့် ရွာလူထုရဲ့ ဆန္ဒကို ကိုယ်စားပြုတာဖြစ်တယ်လို့ လက်ခံကြ
ပြီး ထိုဆုံးဖြတ်ချက်၊ စည်းကမ်းများကို ချိူးဖောက်သူများကိုတော့ ရွာလူထုက ၀ိုင်းကြဉ်လေ့ ရှိပါတယ်...
ဥတ္တာပရာဒေ့ ရ်ှပြည်နယ်မှာတော့ ပန်ချယတ်များ ( ရွာကောင်စီလူကြီးများ ) ဟာသြဇာအာဏာအရှိန်အ၀ါ
ကြီးမားကြပြီး မျိူးနွယ်စုတစ်ခုထဲကမွေးဖွားလာကြတဲ့ ယောကျာင်္းလေးများနဲ့ မိန်းကလေးများဟာ မောင်နှမ
အရင်းတွေပဲ လို့ ယူဆကြရမယ်လို့ ပြောဆိုကြေငြာထားခဲ့ ကြပါတယ်...
ယခုကဲ့ သို့ အိမ်ထောင်မပြုရသေးသည့် အမျိူးသမီးများ ( မိန်းမပျိူလေးများ ) အား မိုလ်ဘိုင်းဖုံးအသုံးပြုခြင်း
မှ တားမြစ်တာဟာ ထိုပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းရှိ ၃သန်းမျှသော လူဦးရေရှိသည့် ဒေသအတွင်း မျိူးနွယ်စုအ
တွင်း အချင်းချင်းပြန်လည် ချစ်ကြိုက်လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခြင်းကို ဟန့် တားထိန်းချူပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှု တစ်
အမျိူးချစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေရဲ့ ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ့် အိတ်ထဲဖိတ်တာကိုများ လူကြီးတွေက ဘာကြောင့် ကန့် 
အရင်းအချာတွေ၊ နီးစပ်တဲ့ ဝမ်းကွဲတွေ မဟုတ်ယင်ပြီးတာပဲမဟုတ်ပါလား...
Posted by peter kyaw | at 11:38 PM |3comments
ခိုးယူပြီးကူညီခဲ့ သည့် သူ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင်
Meizi and her husband praying during the wedding
ဘ၀အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာများရှိခဲ့ မယ်ဆိုယင် နောင်ဘ၀မှာ ဆုံဆည်းပါရစေ
လို့ များဆုတောင်းနေလေကြရော့ သလား....
သူမအသက်ကား ၃၇ နှစ်၊ ကင်ဆာရောဂါ၏နောက်ဆုံးအဆင့် သို့ ရောက်ရှိနေခဲ့ ရလေပြီ...
သူကားအသက် ၄၂ နှစ်၊ ချစ်သူအတွက် ဆေးကုဖို့ ငွေမရှိ၊ ထိုအတွက် တစ်ပါးသူပစ္စည်းဥစ္စာငွေကြေးများ
ခိုးယူခဲ့ သဖြင့် ထောင်ဒါဏ်လေးနှစ်အပြစ်ပေးခံခဲ့ ရလေပြီ...
အချစ်ဆုံးသူရဲ့ ဆန္ဒ နောက်ဆုံးမှာပြည့် ဝခဲ့ ရပြီ....
အမျိူးသမီးတစ်ဦးအနေနှင့် သူမ၏နောက်ဆုံးဆန္ဒကား တစ်သက်မှာတစ်ခါ မင်္ဂလာဝတ်စုံဝတ်ပြီး ချစ်ရသူ
နှင့် မင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွှဲချင်လှပါသည်....
ချစ်သူအတွက် အားကိုးဖွယ်ယောကျာင်္းတစ်ယောက်အနေနှင့် သူကား သူမဆန္ဒပြည့် ဝစေဖို့ ချစ်သူနှင့် ရွှေ
လက်တွဲကာ မင်္ဂလာခန်းမအလယ် လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့ အရာရာစွန့် လွှတ်ပေးဆပ်ခဲ့ လေသည်...
Meizi had to be carried to an ambulance midway through the ceremony
နှစ်ဦးသားဘယ်တော့မှပြန်မဆုံနိုင်သော အန္တိမခရီးရှည်တစ်ခုအတွက် ခြေလှမ်းများ...
သို့ နှင့်၂၀၁၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ တွင်တော့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟီနန်ပြည်နယ်၊ ကျောင်နင် အကျဉ်း
ထောင်တွင် ကင်ဆာရောဂါသည်အမျိူးသမီး မေကျီ တစ်ယောက် သူမအတွက်ထောင်ကျခံပြီး အနစ်နာခံခဲ့ 
သည့်သူမချစ်သည့်သူနှင့် မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနိုင်ခဲ့ ၍ပြုံးပျော်ခဲ့ ရလေသည်...
အသည်းနင့် နင့် ချစ်ရသည်ဆိုပေမယ့် လည်း...ခွဲရမည်က တစ်ဘ၀တာ...
သို့ သော် မူလက နာရီဝက်ကြာပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ခဲ့ သည့် မင်္ဂပွဲတွင် သူမရဲ့ ရောဂါအခြေအနေဆိုးဝါးလာသ
ဖြင့် သူမအနေနဲ့ ဒယီးဒယိုင်ဖြင့် လမ်းလျှောက်ခဲ့ ရပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့် အကြာမှာတော့ ဆက်မနေနိုင်လောက်
အောင်ဖြစ်လာခဲ့ ရသဖြင့် အခမ်းအနားအဆုံးသတ်ခဲ့ ရပါတယ်....
သို့ သော်လည်း ဒဏ္ဍာရီဆန်လှတဲ့ ပုံပြင်သဖွယ် ကြေကွဲဖွယ် မင်္ဂလာအခမ်းအနားကတော့ တက်ရောက်
အားပေးသူ ရာနဲ့ ချီတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို မျက်ရည် ကျစေခဲ့ တာကတော့ အသေအချာပါပဲ....
ဒုက္ခရောက်နေ၊ အခက်အခဲတွေ့ နေတဲ့ ချစ်သူအတွက် ဘ၀ပြဿနာကူညီဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ စေတနာ
ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းပေမယ့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မမှန်ကန်တဲ့ အတွက် နှစ်ဦးစလုံး တစ်ယောက်ကထောင်
ထဲမှာထောင်ကျခံ၊ တစ်ယောက်က ဆေးရုံမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ကြေကွဲစရာ အဖြစ်ဆိုးပါပဲ...
ယနေ့ မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင် ....ဆိုသော်လည်း...
ကံကြမ္မာစေစားချက်က ရက်စက်ခဲ့ ပြီမို့ ....
ချစ်တတ်သူတွေအတွက် နည်းမှန်၊လမ်းမှန်နဲ့ ဘ၀အခက်ခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါစေသတည်း...
She, 37-years-old, late stages of cancer. He, 42-years-old, in order to get money for her treatments, stole and was sent to jail, his sentence4years.
Asawoman, her wish is to wearawedding dress just once in her life. Asaman, for this woman, he has given everything, and in order to realise her wish he took her hand and walked her down the aisle. On the 12th November 2010 in Henan Province Jiaonan Prison Meizi hadabeaming smile on her face, but was staggering as she walked, and the wedding ceremony originally planned to be half an hour only lasted for 10 or so minutes before being hastily ended because she just couldn’t carry on. Nonetheless, this fairy tale-like wedding moved the few hundred guests present to tears.
Posted by peter kyaw | at 11:11 PM |2comments
Labels: news: icpress.cn
Bangladeshi man lashed 100 times for having sex with Filipina maid in the UAE
ယူအေအီးမှာ ဖားခိုးရိုက်တဲ့ ဘကုန်းကုလားရဲ့ 
ကြိမ်ဒါဏ် အချက် ၁၀၀ ဖြစ်အင်...
တရားဝင်လက်ထပ်ထားခြင်းမရှိသေးပဲ ယူအေအီးနိုင်ငံတွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ သည့် နိုင်ငံခြားသား စုံတွဲ
တစ်တွဲကို ကြိမ်ဒါဏ် အချက် ၁၀၀ ကျခံစေဖို့ ( ပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့ )အစ္စလာမစ်တရားရုံးက အမိန့် ချမှတ်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသူအိမ်ဖော်အမျိူးသမီးနှင့် သူမ၏ချစ်သူ ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှနိုင်ငံသား အမျိူးသားတို့ ကိုပြင်း
ထန်ကြမ်းတမ်းသည့် ကြိမ်ဒါဏ်ပေးအပြီးမှာ ဒူဘိုင်းမှ မိုင် ၂၀ မျှသာကွာဝေးသည့် ရှာဂျားပြည်နယ်မှ နှင်
ထုတ်ကာ ၎င်းတို့ ၏နေရပ်တိုင်းပြည်များသို့ ပြန်လွှတ်ရန်လည်း အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ ပါတယ်...
အိမ်ဖော်အမျိူးသမီး၏ အိမ်ရှင်များက အက်စ်အမ် ဟု အတိုကောက်ရည်ညွှန်းသည့် ထိုရည်းစားဖြစ်သူအမျိူး
သား ထိုအိမ်မှထွက်ခွာသွားသည်ကို တွေ့ ရှိခဲ့ လို့ သတင်းပေးပို့ ခဲ့ လို့ ၎င်းတို့ ၂ ဦးကို ရဲများက ဖမ်းဆီးခဲ့ 
ခိုးစားတာလူမိလို့ ခံလိုက်ရတာ ရက်ရက်စက်စက်ပါပဲ...
Punishment: The unidentified man, believed to be pictured in this shocking image, was ordered with his lover to receive 100 lashes for having unlawful sex in the UAE
တရားရုံးမှတ်တမ်းများအရ အန်အမ် လို့ ရည်ညွှန်းတဲ့ အိမ်ဖော်အမျိူးသမီးနှင့် သူမရဲ့ ချစ်သူရည်းစားတို့ ဟာ
လက်မထပ်ပဲ အချစ်နယ်ကျွံခဲ့ ကြတယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ ကြပြီး နှစ်ဦးစလုံး မူဆလင်များဖြစ်ကြလို့ ယခုလို ပြင်းထန်
တဲ့ အပြစ်ဒါဏ်များ ချမှတ်ခံခဲ့ ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
သူတို့ နှစ်ဦးဟာ အိမ်ဖော်မလေး ရဲ့ အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ အိမ်မှာ အကြိမ်ကြိမ် အချစ်ကြီးချစ်ခဲ့ ကြတာဖြစ်
၎င်းရဲ့ နောက်ကျောနှင့် ခြေထောက်တွေမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်များရရှိခဲ့ တာတွေ့ ရလို့ 
အမျိူးသားဖြစ်သူဟာ ၎င်းရဲ့ ပြစ်ဒါဏ်ကိုကျခံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ယုံရပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ၎င်းရဲ့ ဒုက္ခကတော့ ပြီးဆုံးသွားပုံမပေါ်သေးပါဘူး....သူဟာ အိမ်ဖော်မလေးရဲ့ အိမ်ရှင်တွေနေအိမ်
ကို တရားမ၀င်၊ ခိုးဝင်ခဲ့ လို့ နောက်ထပ်ထောင်ဒါဏ် တစ်နှစ်ကျခံရဖွယ်ရှိနေပါတယ်...
အစ္စလာမ်ဘာသာဥပဒေအရ မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုကျူးလွန်ခဲ့ ယင် ကြိမ်
ဒါဏ်အပြစ်ပေးပြီး၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ခဲ့ ယင်တော့ နိုင်ငံကနေနှင်ထုတ်ပြန်ပို့ ခံရမှာဖြစ်ပေမယ့် မူဆလင်မ
ဟုတ်သူများကိုတော့ ထောင်ဒါဏ်အပြစ်ပေးပြီး နိုင်ငံကနေနှင်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်....
ဒူဘိုင်းကမ်းခြေမှာ ရည်းစားဖြစ်သူနဲ့ အချစ်နယ်ကျွံခဲ့ လို့ ကမ္ဘာ့ မီဒီယာတွေမှာ
ဟိုးလေးတစ်ကြော်ဖြစ်ပြီး နှင်ထုတ်ခံခဲ့ ရတဲ့ ဗြိတိသျှအမျိူးသမီး...
Falling foul: Britons Michelle Palmer, pictured, and Vince Acors were deported for allegedly having sex onaDubai beach
ဒီအမှုဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ဒူဘိုင်းကမ်းခြေမှာ လူ့ တော်သလင်းပွဲဆင်နွှဲခဲ့ လို့ ပြန်ပို့ ခံခဲ့ရတဲ့ ဗြိ
တိန်လူမျိူးနှစ်ဦးရဲ့ အဖြစ်နဲ့ အတူတူပါပဲ...
ထိုစဉ်ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ကင့် တ်နယ်၊ ဘရွမ်လေးအရပ်မှ ဗြိတိသျှအမျိူးသား ဗင့် စ်အက်ကောစ်တစ်ယောက်
စီးပွားရေးတွက် သုံးရက်ခရီးအဖြစ်ဒူဘိုင်းကိုလာရောက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ထို့ နောက်၎င်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့ နဲ့ ဒူဘိုင်းရဲ့ နာမည်ကျော် ကြိုက်သလောက်သောက်နိုင်တဲ့ စားသောက်
ပွဲတစ်ခုမှာ ၀င်ရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ ပါတယ်...
လေးနာရီလောက်ကြာအောင် သောက်စားခဲ့ ကြပြီးနောက် သူဟာနိုက်ကလပ်တစ်ခုကို ဆက်လက်ချီတက်
ခဲ့ ပြီး အဲဒီမှာ နိုင်ငံသားချင်းဖြစ်တဲ့ ဒူဘိုင်းမှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဆိုင်ရာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အ
လုပ်လုပ်နေတဲ့ မီရှယ်လ်ပါးလ်မားနဲ့ တွေ့ ဆုံခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အဲဒီညပိုင်းမှာပဲ သူတို့ စုံတွဲကို ဒူဘိုင်းရဲ့ နာမည်ကျော် ဂုဏ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဘာ့ ဂ်ျဒူဘိုင်း ဟိုတယ်အနီးက ဂျူ
မယ်ရား ကမ်းခြေရဲ့ နေပူဆာလှုံရာနေရာမှာ အ၀တ်အစားကပိုကရို ( ကိုယ်လုံးတီးနီးပါး ) နဲ့ တွေ့ ရှိခဲ့ ရပြီး
၎င်းတို့ ကို အများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာ မဖွယ်မရာ လိင်ဆက်ဆံ၊ ချစ်တင်းနှောနေကြကြောင်း၊အရက်သေစာ
သောက်စားကြောင်းတွေ့ ရှိခဲ့ ပေမယ့် အယူခံခုံရုံးက ၎င်းတို့ အပေါ်ချမှတ်ခဲ့ သည့် ထောင်ဒါဏ်သုံးလကို
ဆိုင်းငံ့ ကာ နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားရန်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ ပါတယ်...
ယူအေအီးနိုင်ငံမှ ရှာဂျားကဲ့သို့ ပြည်နယ်မြို့ တော်များဟာလည်း နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေးသမားများ
အလုပ်သမားများ လာရောက်နေထိုင်လုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းဆွဲဆောင်နေကြပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကျင့် တရားဆိုင်ရာတင်းကျပ်တဲ့ ဘာသာရေးဥပဒေတွေရှိနေပါတယ်...
Old and new: UAE cities such as Sharjah are trying to attract foreign workers but have strict moral laws
ယူအေအီးနိုင်ငံဟာ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသအတွက် အနောက်နိုင်ငံသားများရဲ့ စီးပွားရေးအချက်အချာ ဗ
ဟိုအဖြစ်နိုင်ငံတစ်ကာအလယ်မှာမြင်နိုင်ရန် ပိုမိုလွတ်လပ်ပွင့် လင်းတဲ့ သဘောထားမျိူးနဲ့ ချဉ်းကပ်ဆောင်
ရွက်ခဲ့ ပေမယ့် အများစုကတော့ ၎င်းနိုင်ငံရဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဥပဒေကို နှာခေါင်းရှုံ့ အပြစ်
ဒီသတင်းနဲ့ ဆက်စပ်လို့ သူတို့ အစ္စလာမ်ဘာသာအရ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ယင်၊ လက်မထပ်ပဲ လိင်
မှုဆက်ဆံယင် ကြိမ်ဒါဏ်ပေးရမယ်လို့ ဖော်ပြထားပေမယ့် ဒီနိုင်ငံမှာ မကြာခဏ ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ နိုင်ငံသား
များ၊ အာရပ်အမျိူးသားများ မုဒိန်းမှုကျူးလွန်တာ၊ ပြည့် တန်ဆာနဲ့ ပျော်ပါးတာ၊ လက်မထပ်ပဲ တစ်ခြားနိုင်
ငံခြားသူများနဲ့ လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်တာ အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ ရပေမယ့် ( ဒါတောင်သူတို့ သတင်းစာထဲပါသ
လောက် တွေ့ ရ၊ ဖတ်ရတာနော်...တရားရုံးမရောက်၊ သတင်းစာမရောက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဆို ရေလို့ 
တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး...) အဲဒီအာရပ်ကုလား မူဆလင်များကိုတော့ တစ်ခါမှ အခုလို ကြိမ်ဒါဏ် အချက်
၁၀၀ အပြစ်ပေးတယ်လို့ မကြားဖူး၊ မဖတ်ဖူးပါဘူး...
အခုဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံက လူတွေမို့ ဒီလိုရက်ရက်စက်စက်အပြစ်ပေးခံရဖွယ်ရှိတာပါပဲ....
ဥပဒေဆိုတာ ကျောသား၊ ရင်သားမခွဲခြားပဲ တစ်ပြေးညီဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာမှမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ...
အနည်းနဲ့ အများပဲ ကွာတာပါပဲ...
ဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုက မြို့ တော်ဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ သမီး ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကပစ္စည်းအလစ်သုတ်မှုနဲ့ ဖမ်းမိခဲ့ 
တယ်လို့ ဆိုပေမယ့် သူမခံရမယ့် အပြစ်ဒါဏ်နဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံက နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ခံရမယ့် အပြစ်
ဒါဏ်ချင်းကလည်း ပြစ်မှုချင်းတူပေမယ့် ကွာခြားနေမှာအသေအချာပါပဲ....( အဲဒီကလေးမလေးလည်း
အပြစ်ဒါဏ်ဘယ်လောက်ကျတယ်၊ ဘယ်လိုစီရင်ခဲ့ တယ်ဆိုတာတော့ထပ်မတွေ့ မိတော့ ပါဘူး...)
အဲဒီလိုတရားမျှတမှုမရှိတာတွေချည်းတွေးနေယင်လည်း လူ့ လောကမှာနေလို့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး...
အဲဒီတော့ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုသာကောင်းအောင်နေဖို့ ပဲ မှတ်ရတော့ မှာပါပဲ...
ဥပေဒေတွေဆိုတာ လူဆိုးတွေကို ဟန့် တားဖို့ လိုအပ်နေတာတော့ အမှန်ပါပဲ...
A unmarried foreign couple who admitted having sex in the United Arab Emirates have been ordered to receive 100 lashes byasharia court.
The pair -aFilipina maid and her Bangladeshi boyfriend - were also ordered to be deported after the harsh punishment meted out just 20 miles from Dubai in Sharjah.
Police arrested the couple afterahouse owner reported how she saw the man, only identified as S.M., leave the home.
Both the maid - identified in court documents as N.M. - and her lover then admitted to unlawful sex and were handed the harsh punishment because they are both Muslims.
They admitted to having sex several times at the house owned by the maid's sponsor, the employer who previously backed her to stay in the country.
The man is believed to have already undergone his punishment, sustaining horrendous welts on his back and legs.
But the man's ordeal may not yet be over - it was reported that the man may faceayear in prison for illegally entering the sponsor's home.
According to Sharia law if Muslims commit adultery they will be lashed and deported if they are expatriates, but non-Muslims will only be jailed and deported.
The case is reminiscent of that of two British people deported for having sex onaDubai beach in 2008.
Vince Acors, from Bromley in Kent, travelled to Dubai for what was planned asathree-day business trip.
While there he joinedagroup of friends at one of the city's infamous all-you-can drink brunches.
Four hours of eating and drinking later, he moved on toanightclub where he met fellow Briton Michelle Palmer who was working in Dubai asapublishing saleswoman.
Later the same evening the couple were arrested after being discovered semi-naked onasun lounger on the city's Jumeirah beach, near to the iconic Burj Dubai hotel.
They were found guilty of having sex in public, acting indecently and being drunk in public, but an appeal court suspended their three month prison sentence and instead ordered they be deported.
The UAE has attempted to establish itself as centre for western business withasupposedly liberal approach to foreigners, however, many still fall foul of strict sharia laws.
Posted by peter kyaw | at 11:00 AM |2comments
အဲဒီနိုင်ငံမှာတော့ တစ်ယောက်တည်းအပြင်မထွက်နဲ့ နော်...
ကောင်လေးတွေအတွက် ရှော့ ခ် ရှိတယ်...
ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံတွင် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိကောင်လေးတစ်ဦးကို ဓါးများကိုင်ဆောင်ထားသည့် အ
မျိူးသမီး ၁၀ ဦးတို့ က အုပ်စုလိုက်အနိုင်ကျင့် ကာအဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့ သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ ကဆိုပါတယ်...
တောင်ပိုင်း ကုန်းပြင်မြင့် ပြည်နယ်ဒေသ ရဲချူပ် တက်ဒီတေး ကပြောကြားခဲ့ ရာမှာ အဆိုပါအမျိူးသမီးအုပ်
စုဟာ ကျောင်းသားလူငယ်ကို လွန်ခဲ့ တဲ့ သောကြာနေ့ မှာ မန်ဒီအရပ်က ပြည်နယ်ခန်းမ အနီးအပြင်ဘက်
မှာ တိုက်ခိုက်ကျူးလွန်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
"ဒါဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့ ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူ့ တိရိစ္ဆာန်တွေဟာ မည်
သူမည်ဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ စုံးစမ်းဖော်ထုတ်နေပါတယ်..." လို့ သူကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
" အမျိူးသမီး ၁၀ယောက် ကျော်ဟာ မီးဖိုချောင်သုံးဓါးတွေနဲ့ အဆိုပါကောင်လေးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ ပြီးနောက်
၄ ယောက်က ကောင်လေးနဲ့ လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခဲ့ ပါတယ်..." လို့ လည်းသူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သူငယ်လေးဟာ ဆေးရုံကိုဆေးကုသမှုခံယူဖို့ သွားရောက်ခဲ့ ပါတယ်လို့ ရဲချူပ်ကပြောဆိုလိုက်ပြီး အမျိူးသ
မီးတွေအနေနဲ့ ထိုကောင်လေးကို အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်စေမှာကိုလည်းစိုးရိမ်းမိတယ်လို့ သူ
က ဆက်ပြောခဲ့ ပါတယ်...
" အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ / အေအိုင်ဒီအက်စ် ဟာ ပါပူဝါနယူးဂီနီမှာတော့ ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပြီး အဆိုပါအမျိူး
သမီးတွေဟာ ထိုရောဂါ ကူးစက်ခံနေရလိမ့် မယ်လို့ ကျွန်တော် စိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်...
အမျိူးသမီးတွေအနေနဲ့ ညရေးညတာအပြင်ထွက်ယင် သတိထားဖို့ ကျွန်တော်အမြဲပဲ သတိပေးနေခဲ့ ပါ
တယ်....အခုအခြေအနေအရတော့ ယောကျာင်္းလေးတွေလည်း သတိထားရတော့ မှာဖြစ်တယ်လို့ သတိ
ရဲတပ်ဖွဲ့ ဟာ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် ယခုကဲ့ သို့ တိုက်ခိုက်ကာ အဓမ္မပြုကျင့် မှုဖြစ်ပွားရ
သလဲဆိုတာတော့ မသိနိုင်ပါသေးဘူး...." လို့ သူကဆက်ပြီးပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
A 17-year-old village boy has been gang-raped by 10 knife-wielding women in Papua New Guinea, police say. Southern Highlands Province police commander Teddy Tei said the gang of women attacked the schoolboy just outside the provincial centre of Mendi on Friday.
“This isaserious matter and police are trying to identify who these animals are,” he said. “More than 10 women with kitchen knives attacked him and four women had sexual intercourse with him”.
“HIV/AIDs isaproblem in PNG and I am concerned the women might be infected. I always warn the women to be careful at night but I am now warning the men too. Police are investigating but it is not clear why the attack happened,” he said.
Posted by peter kyaw | at 8:32 AM | 1 comments
Police pull over triple-decker truck
တရုတ်နိုင်ငံမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များဟာ ကုန်တင်ယာဉ်တစ်စီးပေါ်မှာ နောက်ထပ်ကုန်တင်ယာဉ် နှစ်စီးကို တစ်
စီးစီထပ်ပြီးတင်ဆောင်မောင်းနှင်လာတာကို တွေ့ ခဲ့ ရတဲ့ အတွက် အလွန်ပင်အံ့ အားသင့် သွားခဲ့ ကြရပါ
သူတို့ ဟာ အဆိုပါကုန်တင်ယာဉ်ကို ရပ်တန့် စစ်ဆေးခဲ့ ရာမှာတော့ ထိုယာဉ်မောင်းက ၎င်းအနေနဲ့ ယာဉ်
မောင်းဆီချွေတာဖို့ ရယ်၊ လမ်းတစ်လျှောက်ဂိတ်တွေမှာကောက်ခံတဲ့ အခွန်ကိုသက်သာစေဖို့ ရယ် ရည်
ရွယ်ပြီး ထိုသို့ ပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ထိုကုန်တင်ယာဉ်သုံးစီးထပ်ကြီး မောင်းနှင်သွားတာကို တွေ့ မြင်ခဲ့ ရတဲ့ ရှီအန် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်က
မော်တော်ယာဉ်မောင်းသမားတွေက ကင်းလှည့် ယာဉ်ထိန်းရဲတွေကို သတင်းပေးတိုင်ကြားခဲ့ လို့ ယခုကဲ့ 
သို့ ရပ်တပ်အရေးယူးခဲ့ ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
" ကျွန်တော်တို့ ဟာ ( အစပထမတော့ ) ဒီသတင်းပေးတိုင်တန်းမှုကို ယုံရမလို၊ မယုံမရမလိုဖြစ်ခဲ့ ကြရ
ပါတယ်.... ကုန်တင်ယာဉ်တစ်စီးက နောက်ထပ်ကုန်တင်ယာဉ် ထရပ်ကားနှစ်စီးကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတင်
ဆောင်မောင်းနှင်သလဲ ဆိုတာကို မြင်ရတော့တဲ့ အထိ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ နားမလည်၊ သဘောမပေါက်
နိုင်ခဲ့ ကြပါဘူး..." လို့ ရဲအရာရှိ ရှိကျူရှန်း ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်လည်းအကုန်သက်သာ၊ အခွန်ဂိတ်တွေမှာလည်း တစ်စီးစာပဲပေးရ...
အကြံပိုင်ချက်ကတော့ သူ့ ထက်ကောင်းတဲ့ သူတောင် သူ့ လောက်ကောင်းနိုင်လိမ့် မယ်မထင်...
ထရပ်ကားမောင်းသမား ချန် ကတော့ ၎င်းဟာ ထိုသုံးထပ်ကားတွဲကို ဟူဘေပြည်နယ်မှ ယခုနေရာအထိ
ခရီးမိုင် ၆၀၀ နီးပါးမောင်းနှင်လာခဲ့ ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်....
သူ့ ကိုမြို့ တော် ဘေဂျင်းရောက်တဲ့ အထိ ထရပ်ကားအသစ်သုံးစီးမောင်းနှင်ယူဆောင်လာဖို့ ပြောဆိုမှာ
ကြားခြင်းခံခဲ့ ရလို့ ကုန်ကျစားရိတ်နည်းအောင်၊ ခြွေတာတဲ့ အနေနဲ့ ကားတွေကို တစ်စီးပေါ်တစ်စီးထပ်ပြီး
တင်ဆောင်မောင်းနှင်လာခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ သူက ရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" အပေါ်မှာ ထပ်ထားတဲ့ ထရပ်ကားနှစ်စီး လဲပြိုကျမှကိုတော့ စိုးရိမ်မီလို့ ကျွန်တော်ဟာ ကားကိုမြန်မြန်မ
မောင်းခဲ့ ပါဘူး...." လို့ လည်းသူကဆိုပါတယ်...
ရဲတပ်ဖွဲ့ က ၎င်းကို ပေါင်စတာလင် ၁၀၀ ( ဒေါ်လာ ၁၅၀ ခန့် ) နှင့် ညီမျှတဲ့ ငွေကြေးဒါဏ်ငွေပေးဆောင်
စေခဲ့ ပြီး ထရပ်ကားများကိုတော့ နီးစပ်ရာနေရာဖြစ်တဲ့ ရှီကျောင်တုံး ကားကြံ့ ခိုင်ထိမ်းသိမ်းရေးအလုပ်ရုံဆီ
ကို ဆွဲယူသွားပြီး ၎င်းအနေနဲ့ ဘေဂျင်းရောက်အောင်နောက်ထပ်ယာဉ်မောင်းနှစ်ဦး ရှာပြီးမောင်းနှင်စေခဲ့ 
Police officers in China were stunned to spotatruck driver carrying another two trucks on top of each other. They pulled over the driver who told them he was trying to save fuel bills and motorway tolls.
Patrol officers on the Shi'an Highway acted after receiving calls from concerned motorists who had spotted the trucks. "We didn't know whether to believe the calls - we couldn't understand how one truck could carry two other trucks until we saw it," said Officer Shi Qiusheng.
Driver Chen admitted he had driven the three trucks nearly 600 miles from Hubei Province. He told police he had been ordered to drive the three brand new trucks to Beijing and decided to load them on top of each other to save money.
"I was worried that the top two trucks might topple over, so I didn't drive very fast," he said. Officers fined him the equivalent of £100 and towed the trucks to the nearby Xizhaotong service station so he could find two other drivers to help him take the trucks to Beijing.
Posted by peter kyaw | at 7:49 AM | 1 comments
စိတ်လက်ပေါ့ ပါးစရာအင်တာနက်ပေါ်က ပုံရိပ်လေးတွေပေါ့ ...
အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ စကားလုံးပေါင်းမြောက်များစွာကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုလေတာမို့ ဘလော့ဂ်ကြွလာပ၇ိတ်သတ်များ အပျင်းပြေစေ၊ အတွေးရစေဖို့အင်တာနက်က တွေ့ မိသမျှ ၊ တစ်ချိူ့ 
လည်း ဖော်ဝါ့ ဒ်မေးကရတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပြလိုက်ပါတယ်...
အောက်ကစာသားများကတော့ မိမိရဲ့ စိတ်ကူးအတွေးများမို့ တစ်ခါတစ်လေမူရင်းပုံနဲ့ ရည်ရွယ်ရာချင်း
မူရင်းဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသူကိုဖော်ပြပြီးဂုဏ်မပြုနိုင်ပေမယ့် ထိုပုံများရိုက်ခဲ့ ပြီးကိုယ်ကျိူးမဖက်ပဲ အင်တာနက်
မှာ တင်ထားပေးနိုင်တာကိုက နည်းတဲ့ စိတ်ထားမြင့် မြတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး....( လိုလိုလားလားဖော်ပြတာ
ဖြစ်ခဲ့ ယင်ပေါ့ ...သူရိုက်ထားတဲ့ ပုံကို တစ်ယောက်ယောက်ကတင်တာဆိုယင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ပေ
ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ ပုံတစ်ပုံမှ မပါဘူးနော်...
ဟန်ချက်သာလွဲသွားလို့ ကတော့ မတွေးရဲစရာ...
ဘီးနဲ့ ဓါး ...
အဲဒီနှစ်ခုပဲ ချမ်းသာတဲ့ ကောင်ဆိုယင်တော့ ဝေးဝေးရှောင်ကြနော်....
တွေ့ လား...မိန်းမ မသိအောင်ဖွက်ထားတဲ့ ဘတ်ငွေ ကျူပ်မှာရှိတယ်...
တယ်လည်း ဟန်ကျတဲ့ ငွေရေစက်ပါလား...
ဘာသာရေး၊ ချစ်မှုရေးရာ၊ လျှိူ့ ဝှက်ဆန်းကြယ် ...စတာတွေသုံးမျိူးစလုံးပါရမယ့် အတိုဆုံးဝတ္တုတို...
ဘုရားရေ !!! ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ !!!! ဘယ်သူနဲ့ ပါလိမ့် !!!
( စပွန်ဆာတွေ...စေတနာတွေများလွန်းလို့ မမှတ်မိတော့ ဘူး...)
ယောကျာင်္းနဲ့ မိန်းမ....ယောကျာင်္းဖြစ်ရတာပဲ ကံကောင်းတယ်...
ကုလားမ စည်းနင်းတဲ့ ကုလားမကြီး....နိုင်ငံရေးဆိုတာတစ်ခါတစ်လေတော့ လည်း...
ယောင်လို့ မှအထဲမ၀င်ရမိစေနဲ့ ...
ဘက်လိုက်တယ်....ကိုယ့် ကျတော့ အင်္ကျီမပါယင်ပေးမ၀င်ဘူး...
ကောင်မလေးတွေကျတော့ အင်္ကျီမပါယင် ဘီယာအလကားတိုက်တယ်တဲ့ ...
Posted by peter kyaw | at 4:15 AM | 1 comments
Labels: photo: fun
Indian village bans single girls from using mobile...
Bangladeshi man lashed 100 times for having sex wi...
Boy gang-raped by 10 women at knifepoint in Papua ...
Faithful dog waits for owner near Shanghai fire wi...
Girls, girls, girls:Hot Cheerleaders' bikinis blam...
အပန်းဖြေစရာဓါတ်ပုံကမ္ဘာ.... အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပံ...
'I was bullied for my height but now I'm famous so...
The lonely life ofasix-year-old boy
Indian doctor prepares to dissect his father's bod...
The curious case of shrinking genitalia in India
Flood-hit policemen patrol on stilts ...
Watching porn can cure PE
Britain’s oldest man can’t recall fifth secret to ...
64yr old man set to wed 18yr old girl
The family that prays together... gets bigger and ...
Whatacool place to hang out: Zlata the contortio...
Porn mogul plans hotel chains where guests stay fo...
M'sian bomohs capture9spirits
Canadian couple who won $11.2m in the lottery give...
Man completes high wire walk - on stilts
India's oldest student at 100, going strong
'Romanian' girl aged TEN gives birth to healthy 6l...
The bravest man in Britain? Expectant dad about to...
Flasher is bitten by victim's dog
The most expensive iPhone and iPhone cases